Instagram inonyangarika kubva kuApple Watch neazvino kuvandudza | Ndinobva mac
Kana iwe ukagadzirisa yako iPhone kune yazvino vhezheni ye Instagram, 39.0, uye une Apple Watch, iwe unenge wave nekushamisika kwakashata: Instagram yeApple Watch yanyangarika. Ndokunge, ikozvino kana iwe unogona kutevera, kwechinguvana, chikafu chako kubva kuApple smart wachi.
Tinofanira kudzokera kumashandisirwo ekutanga eApple Watch kuti tizive chikonzero chikuru chekuparara uku. Uye ndizvozvo Instagram inogadzirwa pasi pewatchKit 1.0, iyo yaitsamira pa iPhone kuti ishande zvakanaka. Zvisinei, Apple pachayo yakatonyevera izvozvo Kubva muna Kubvumbi 1, 2018, yakamira kutsigira chikuva ichi. Zvese zveApple Watch zvinoshandiswa zvaifanirwa kunge zviri zvemunyika uye zvakagadziridzwa pasi peiyo watchKit 2.0 yekuvandudza kit (SDK).
Kusvika parizvino, Instagram yeApple Watch yakashanda seimwezve yekuwedzera kwesicelo yataive nayo pane yedu iPhone. Kunyange zvakadaro, pasocial network haina kumbobvira yashinga kuvhura vhezheni yeApple yeApple Watch iyo yaizoshanda yakazvimiririra pane smartwatch, kunyangwe iine kugona kubatanidza kune maWiFi netiweki uye munguva pfupi yapfuura, kushandisa LTE network -muSpain isu tichakamirira iyi vhezheni.
Sezvakataurwa kubva 9to5mac, zvichiri Hatizive kana kutsakatika uku kuchave kwechigarire kana isu tinofanirwa kungoona kana mushure meiyi mhedzisiro mune midhiya inokonzeresa Instagram kugadzira uye kuvhura yakazvimirira vhezheni yeApple Watch -Chimwe chinhu chakavimbiswa kare neGoogle neMepu. Zvino, parizvino patova nezvikumbiro zvakati wandei zvakaburuka mumota uye zvakatama kubva kune smart smart chikuva. Mimwe yacho ndeiyi: Slack —chishandiso chakakurumbira chekutumira mameseji chinoshanda kwazvo pabasa reboka-, Twitter, Amazon, eBay neGoogle Mepu.
Kune vamwe vese, zvinoita sekunge Vashandisi veApple Watch havana kunyunyuta zvakanyanya nezvese kusavapo kwatareva. Uye iko kushandiswa kweiyo smart wachi kuri kuenda mune dzimwe nzira - kunyangwe Apple iri kuisvika nenzira iyi - senge hutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Instagram inonyangarika kubva kuApple Watch neyechangobva kuitika
Jose D'Angelo akadaro
Ini handizive Rick, zvinoita kunge zvekunyepa
Pindura kuna Jose D'Angelo
Ruzhinji rwekufambisa ruzivo runosvika kune mamwe maguta eAmerica